कला र शिक्षा क्षेत्रसंगै सामाजीक कार्यमा सक्रिय बिमला भन्छिन् ‘सकारात्मक सोचले नै समाज परीवर्तन हुन्छ’
सोमबार, कात्तिक १, २०७८ ०९:४७:५० युनिकोड
देशभर १२ हजार ५९८ जनामा सक्रिय सङ्क्रमित
साफ च्याम्पियनसिप फाइनल : नेपाल उपविजेतामा सीमित
नेपाली फुटबल टोलीलाई बधाई दिंदै राष्ट्रपतिले भनिन - फाइनल प्रतिस्पर्धाका लागि अग्रिम शुभकामना
ताइवान दक्षिणी क्षेत्रमा आगलागी: ४६ को मृत्यु, ४१ जना घाइते
विजयादशमीको टीका थाप्ने शुभ साईत समय बिहान १०:०२ बजे
गुल्मीमा जीप ५०० मिटर तल खस्यो: ३ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते
मृतक सबैको सनाखत, ३२ जनामा एकै नगरपालिकाका २९ जना (विवरण)
साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलपछि प्रशिक्षक अलमुताइरीको पद त्याग गर्ने घोषण
कला र शिक्षा क्षेत्रसंगै सामाजीक कार्यमा सक्रिय बिमला भन्छिन् ‘सकारात्मक सोचले नै समाज परीवर्तन हुन्छ’ जीवन कति लामो बाँच्छौं, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । तर, कस्तो जीवन बाँच्छौं, त्यसले खास अर्थ राख्छ ।
मंगलबार, असोज १२, २०७८ जनता नेपाल
काठमाडौं - बिमला हुमागाईं (बोध शर्मा) कला र शिक्षाक्षेत्रसंग परिचित नाम हो । पछिल्लो समय सामाजीक कार्यमा सक्रिय बनेकी उनले महिला शसक्तीकरण, सम्मान र स्वतन्त्रतालाई प्रवर्धन गर्दै नारी हकहितकालागि आवाज उठाउँदै आएकी छिन् ।
बिगत एक दशक देखि कला,साहित्य ,शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय उनी बोध नलेज इन्टरटेनमेन्टको सिईओ हुन् । चक्रवर्ति हवि एजुकेशन ऐकेडमीको व्यवस्थापकिय भूमिकामा रहेकी उनले विद्यार्थीलाई सृजनात्मकताको अभ्यास सुरु गरेकी छन् । उनै बहुप्रतिभाषासाली व्यक्तीसंग उनको दैनिकी र भावि योजनाका विषयमा गरीएको कुराकानीको मूख्य अंश ।
आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
आजभोलि पुस्तक लेखन, गित संगीत, बोध इन्टरटेनमेन्ट प्रालिको दैनिक कार्य लगायत विभिन्न संघ संस्था कलेजको काममा समय दिइरहेकी छु ।
आफ्नो दैनिक कार्यमा समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ?
सर्वप्रथम त मानिसमा काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। समयलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतिपूणर् नै हुन्छ । कोभिड-१९ र लकडाउनले मारमा परेको हाम्रो मनोरंजन क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन हामीनै सक्रिय हुनुपर्छ। मैले आफ्नो दैनिक काम योग अभ्यासबाट सुरु भएर दिउँसो कलेज र कार्यालय, विभिन्न कार्यक्रम, गित संगीत र साहित्य लेखन तथा नयाँ म्युजिक भिडियोहरुको छायांकनको तयारि गरिरहेकी छु । देश र समाजको लागि सेवा गर्छु भन्ने द्रिढ संकल्प लिएर अगाडी बढ्दा समय ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ।
म साहित्य लेखनमा रुचि राख्ने भएकाले साहित्य सृजनामा व्यस्त छु ।मेरो पहिलो सृजना ‘अधबैंसे’लाई अत्याधिक पाठकले मनपराएको हुँदा अहिले म मेरो दोस्रो प्रयास ‘बिग्रिएको रिदम’ ल्याउने तयारिमा छु। जुन मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा लेखिएको पुस्तक हो।
सामाजिक क्षेत्रमा तपाईले के गरिरहनुभएको छ ?
म एक सामाजिक महिला हुँ, अरुको दुख पिडा देख्न सक्दिन। हामी सामाजिक प्राणि भएर जन्मे पछि समाजकोलागि केही गर्नुपर्छ भनेर कोभिड १९को महामारीका कारण दुई छाकछार्न मुस्किल भएका नागरिकलाई खाना देखि राहत वितरण सम्मको कार्य गरेको छु। मानिस आफैले चाहेर कोहि पनि अनाथ र गरिब हुने होइन त्यसैले आफूले आर्जन गरेको रकमबाट केहि प्रतिशत सामाजिक कार्यमा लगाउने गरेकी छु।
जीवनलाई सार्थक बनाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
जीवन आफ्नो लागि मात्र जिउनुको कुनै अर्थ हुँदैन, हामी सामाजिक प्राणी भएकोले गर्दा देश र समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यो देशलाइ समृद्ध अनि विकसित बनाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो । काम गर्दै जाँदा कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ तर, हामी आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित नभई राम्रो कामकोलागि अगाडि बढ्नु पर्छ । यसले आफ्नो जिवनको अर्थ बुझाउन सक्छ । जीवन सुखदुख, हाँसो र रोदनको समिश्रण पनि हो । जीवन एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो त्यसैले म कर्ममा विश्वास गर्छु ।
तपाईले जीवनका विषयमा भोगेका कुरा के - के हुन् ?
जीवन जिउनु एक कला हो । जन्मिएपछि हामी एकदिन मर्नुनै पर्छ । तर, हामी हाम्रो जिबनकालमा कस्तो जीवन बाँच्छौं भन्ने कुरा महत्वपूणर् हो । एउटा भनाई छ, ‘जीवन कति लामो बाँच्छौं, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । तर, कस्तो जीवन बाँच्छौं, त्यसले खास अर्थ राख्छ ।’ जन्म पश्चात् जीवनलाई सफल बनाउनु उदेश्य प्राप्ति हो । जीवनमा सफलताकोलागि इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र कर्मशक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्छ । इच्छाशक्ति र कर्म गर्ने व्यक्तिले नै ज्ञान शक्ति प्राप्त गर्छ ।
जब निराकार आत्मा, साकार शरीर, इन्द्रिय र मनको साथ मिल्छ, तब शरीरमा शक्तिको सञ्चार हुन्छ । जन्म भएपछि आफ्नो पूणर्शक्तिको विकास गर्नु जीवनको लक्ष्य हो । जीवनमा हरेक मानिसको सपना हुन्छ। अधिकांश मानिस आफूलाई सफल, सबल र सक्षम बनाउन चाहान्छन् ।तर, हामीले आफूले भने जस्तो जिवन व्यतित गर्न सकिरहेको हुँदैनौ। तसर्थ सुख दुखको समिश्रणलाई आत्मासाथ गर्दै सत्कर्म गर्नु नै यो अमूल्य जिवनको सार्थकता हो ।
तपाईलाई समाज परिवर्तन गर्न के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
म एउटा कर्ममा विश्वास गर्ने महिला हुँ ।समाज कर्ममा विश्वास गर्नेकालागि सधै सफत सावित हुन्छ । राजनीतिक तथा सामाजिक वितृष्णाले गर्दा समाज नकारात्मक सोचको सिकार बन्दै गइरहेको छ । हाम्रो समाजमा आलोचना गर्ने प्रवृत्ति संस्कारकै रूपमा विकास भइरहेको छ ।जहाँ इन्टरनेटमा पहुँच हुनेहरूकालागि अहिले आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्न फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल राम्रो माध्यम बनिरहेको छ ।
अहिलेका युवाहरुलाई भविष्य प्रति सजग बनाउनुपर्छ । काम गरेपछि सफल भइन्छ ।लगानी गरेपछि प्रतिफल मिल्छ । यात्रा प्रारम्भ गरेपछि नै गन्तव्यमा पुगिने हो ।यसका लागि आत्मविश्वास चाहिन्छ । उच्च मनोबल हुनुपर्छ ।प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, प्रशंसाले भरिएको समाजमा मात्रै उन्नतिको सम्भावना हुन्छ । निराशा, कुण्ठा मात्रै व्यक्त गर्ने, अरूको अनावश्यक चियोचर्चो र आलोचना गर्ने संस्कारले सिर्जनात्मकता सम्भव हुँदैन । यसकालागि सकारात्मक सोचकै आवश्यक हुन्छ र समाज परिवर्तन हुन्छ । सामाजिक रुपान्तरण सामाजिक विकासकालागि अपरिहार्य छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १२, २०७८, १६:४४:००
इजरायलका २०औँ राजदूत खनान गोडेरको बिशेष अन्तवार्ता
स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई ५ प्रश्न
नेपाल र पाकिस्तानको हिमालले दुई देशको सम्बन्धलाई जोड्छ: सहरोज कासिफ
बैङ्क संग ऋण लिएर भएपनि शिक्षकको तलब भुक्तानी गर्छौ – प्यावसन अध्यक्ष टिकाराम पुरी
युरोप : देश अनुसारको शिक्षा
बिहीबार, भदौ १८, २०७७ जनता नेपाल
देशभर १२ हजार ५९८ जनामा सक्रिय सङ्क्रमित शनिबार, असोज ३०, २०७८
विजयादशमीको टीका थाप्ने शुभ साईत समय बिहान १०:०२ बजे जनता नेपाल
गुल्मीमा जीप ५०० मिटर तल खस्यो: ३ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते जनता नेपाल
मृतक सबैको सनाखत, ३२ जनामा एकै नगरपालिकाका २९ जना (विवरण) जनता नेपाल
यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान: निम्न स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना जनता नेपाल
एक वर्षअघि किनेर ल्याएको रेलको पार्टपुर्जामा खियालाग्न सुरु आइतबार, असोज ३, २०७८
नेपाली फुटबल टोलीलाई बधाई दिंदै राष्ट्रपतिले भनिन - फाइनल प्रतिस्पर्धाका लागि अग्रिम शुभकामना शुक्रबार, असोज २९, २०७८
साफ च्याम्पियनसिपमा इतिहास रच्दै पहिलोपटक नेपाल फाइनलमा बिहीबार, असोज २८, २०७८
आज त्रिदेशीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल र ओमान खेल्दै आइतबार, असोज ३, २०७८
एएफसीसी वुमेन्स एसिया कप छनोट खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग २–१ ले पराजित आइतबार, असोज ३, २०७८